Ebe - ITS Tech School
New Delhi, isi obodo India, bụ nnukwu obodo ukwu nke dị n'ebe ugwu. Delhi bụ ihe zuru ezu nke 1600 afọ omenala na nkà na ụzụ obodo ukwu obodo. Delhi na-egosiputa ihe ncheta akụkọ sitere n'aka Mughal Era, gụnyere Red Fort, Humayun's Tomb and Qutub Minar. A na - ede Delhi na '50 Places of Life' site na National Geographic Traveler Magazine. Mgbe ị bịarutere Delhi, ị ga-enwetakwa ohere ịchọpụta TAJ MAHAL (Ọhụụ nke ụwa) dịka ọ dị nso na Delhi ma nye ya dịka njem mmemme nke ITS nyere gị.
Ngwọta Nchọpụta Ọhụrụ ọhụrụ na-enwe isi ụlọ ọrụ naGurgaon. OTU bụ isi na ọzụzụ IT, ụlọ ọrụ ọzụzụ na ụlọ ọrụ na-eweta ngwọta.Ụlọ akwụkwọ ITSenyeụlọ ọzụzụ na gurgaonmaka ọzụzụ ụlọ ọrụ na ebe ọgaranya na-amụ ihe na ngwá ọrụ anyị na-arụ ọrụ na mpaghara ụlọ ọrụ dị elu dịka ọhụụ nke ụlọ ọrụ ọhụụ chọrọ.
ANYỊ nwere ọtụtụụlọ ọzụzụ na Gurgaonya bụ na South City 1, Ụlọ Ahịa Mmanụ na Mpaghara - 14 dị nso na Huda City Center, Iffco Chowk na MG Road metro. ANYỊ nwere 13ụlọ ọzụzụ maka ịgbazinye na Gurgaonma nwee ike ibunye ndị 270 so na otu ụbọchị. Ọ BỤEbe Ọzụzụ Na Gurgaonenwere igwe nke elu-igwe, nnukwu ihe ndozi na uhie.
Were iku ume site na klas gị na mpaghara ebe a na-eme ka ụmụ akwụkwọ niile gbakọta ọnụ. Nleta nke di iche iche nke India na Afrika ka ha nye gi ihe n'eto gi.
Nabata na ụzọ ọhụrụ na nke kachasị mma ịme njem njem, ebe ị na-enwe mmetụta zuru ezu & ị ga-enweta ezigbo izu ike.
B 100 A, Obodo 1 nke dị na South, nso Ụlọ Nche Banye,
Onwa 9 Nri: 00-18: 00